China Usb-C hub-CH06B fekitari uye vagadziri | Brocade Boka
Kumhanya Kwakanyanya & Kubudirira
Matatu USB 3.0 madoko ekuchinjisa data anomhanyisa anosvika ku5Gbps. Wedzera chidzitiro chako neHDMI chiteshi kuHDTV, tarisa kana purojekita. Tsigira HDMI kuburitsa inosvika ku4K UHD (3840x2160 @ 30Hz) resolutionutio
Kuendesa Simba Kwakabatanidzwa
Iyo-c-yekuchaja chiteshi inogona kupfuura kusvika kune 100w simba, uye nekupa imwe simba kune rakaomarara diski, DVD mutyairi uye zvishongedzo zvakabatana ne USB chiteshi
Iyo Hub inouya neakakwira mhando yakatsetseka ealuminium alloy zvinhu uye Uni-muviri Nyaya. Anti-zvigunwe, kupisa kupisa, kureruka uye compact dhizaini. Yakabatanidzwa LED Indicator. Iyo Hub inowedzera zvishandiso zvako zvekubatanidza uye chengetedza nzvimbo.
Brocade Smart Space inopa iyo yakazara renji kubva pre-kutengesa kusvika kune-yekutengesa sevhisi, kubva pachigadzirwa kuvandudza kuongorora mashandisiro, zvichibva pasimba rehunyanzvi simba, yepamusoro chigadzirwa kuita, mitengo inonzwisisika uye basa rakakwana, isu ticharamba tichikudziridza, kusvika ipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zve USB C nemasevhisi, uye inosimudzira kudyidzana kusingaperi nevatengi vedu, zvakajairika kusimudzira uye kugadzira ramangwana riri nani.
Brocade Smart nzvimbo inotsigira mweya we "hunyanzvi, kuwirirana, kushanda pamwe uye kugovana, nzira, pragmatic kufambira mberi". Tipeiwo mukana uye isu ticharatidza kugona kwedu. Nerubatsiro rwemutsa wako, tinotenda kuti tinogona kugadzira ramangwana rakajeka newe pamwe chete.
Kubva pakagadzwa kambani yedu, takaona kukosha kwekupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvakanakisa pamberi-pekutengesa uye nemashure-ekutengesa masevhisi.
Matambudziko mazhinji pakati pevatengesi vepasirese nevatengi zvinokonzerwa nekusafambidzana kutaurirana Mutsika, vatengesi vanogona kusazeza kubvunza zvinhu zvavasinganzwisise. Brocade putsa izvo zvipingamupinyi kuti uve nechokwadi chekuti iwe unowana izvo zvaunoda padanho raunotarisira, kana iwe uchida icho.
Pashure: Usb-C hub-CH06A
Zvadaro: Usb-C hub-CH07A
Mashoko Aluminium Alloy neApple CNC maitiro
3 * USB3.0 Kusvika pa5Gbps
1 * Type C Kusvika pa5Gbps
1 * HDMI Kusvika ku4K UHD (3840 × 2160 @ 30Hz) / 1080p / 720p
1 * TD Kusvikira 90MB / s
1 * SD Kusvikira 90MB / s
Mavara sirivheri grey kana imwe vara yesarudzo
Inoshanda tembiricha -40 ° C ~ 60 ° C
Chivhariso & kutamba Hapana kudikanwa Kuisa Kwekutyaira
Divi 110 * 36 * 11 mm
Divi （nepakeji） 161 * 90 * 22 mm
Kurema 63 g
Kurema （nepakeji） 90 g
Zero Latency Uye Inodhura-inoshanda 4K @ 60Hz HDMI E ...